Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002
 စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတောင်း (0)
flat Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး
ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး
နယူးခြောက်စက် Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး
electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု >
မြင့်မားသောဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings >
သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve
သွေးခုန်နှုန်း Valve မြှေး
filter စာနယ်ဇင်း >
ပန်းကန်-and frame ကို Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
ဒေါင်လိုက် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
ခါးပတ် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
အိတ် Filter ကို
ကြယ်ပွင့် type ကို discharge
ကျောက်မီးသွေး Injection ကိုစက်စီးရီး
သွေးခုန်နှုန်း Duster စီးရီး
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge ထုတ်ကုန်များ)
အိတ် Filter ကို
ကြယ်ပွင့် type ကို discharge
ကျောက်မီးသွေး Injection ကိုစက်စီးရီး
သွေးခုန်နှုန်း Duster စီးရီး
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Mr. Dou Liangliang
Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
ကြည့်ရှုခြင်း:  
တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
မူလအစရာ: Botou မြို့, hebei ပြည်နယ်, တရုတ်
tag ကို: တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစား Pulse Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး
ဒီအမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းအဆင့်မြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနည်းပညာများသက်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုအပြောင်းလဲခြင်းအချိန်တိုတို, တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး, ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။...
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send ခြင်းတောင်းမှ Add အသေးစိတ်ကိုကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Supply နိုင်ခြင်း: 10000
tag ကို: တင်းကျပ်လှုံ့ဆျောကြှေးမှေး , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve , လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုဖျက်ထုတ် Valve
ကုန်ချ ရိနာစွဲဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး, လေထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အစာကျွေးသည်အခြားကိရိယာများများအတွက်အဓိကပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်ပြီး, မှုန့ပစ္စည်းများနှင့်တောင့်ပစ္စည်းအဘို့သင့်လျော်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် အဆိုပါချ device...
CCJ / A အမျိုးအစားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မိုးရွာသွန်းမှု
min ။ အမိန့်: 3000 Others
tag ကို: Impulse စိုစွတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , Desulphurization နှင့် Denitrification ပစ္စည်း , CCJ / A အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး
CCJ / A အမျိုးအစားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မိုးရွာသွန်းမှု၏အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို CCJ / A အမျိုးအစားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မိုးရွာသွန်းမှု: အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း: CCJ / A...
tag ကို: အလျားလိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , HX-1410 ဖုန်ကောက်ခံရေး , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး၏မြင့်မားသောစွမ်းရည်
HX-1410 ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover အသေးစိတ်ကို HX-1410 ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်း features တွေ: 1. HX-1410 ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းတစ်ခုတည်းဆလင်ဒါများနှင့်အများအပြားတစ်ခုတည်းဆလင်ဒါကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။...
tag ကို: လူပျိုစက်ကောက်ခံရေး Pulse , သွေးခုန်နှုန်းဂျက်လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး , လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး
လူပျိုစက်မြေမှုန့်စုဆောင်း အဆိုပါတစ်ခုတည်းသောစက်မြေမှုန့်စုဆောင်း (တစ်ခုတည်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနှင့်တစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို) အထူးဘိလပ်မြေစက်ရုံများ၏ခေါင်မိုးများနှင့်အောက်ခြေအဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ခါးပတ် conveying...
UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို
tag ကို: single-စက် Bag Filter ကို , ပဲမျိုးစုံအိတ်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအသေးစိတ်အကြောင်းအရာ: တစ်ဦးက, UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကိုတရုတ်ရှိအခြားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့် remover နဲ့နှိုင်းယှဉ် (ပြည်တွင်းရေး filter...
HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို
tag ကို: HD ကိုအမျိုးအစားလူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး , : D အမျိုးအစားလူပျိုစက် Bag Filter ကို , မြင့်မားသောစွမ်းရည်လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး
HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအသေးစိတ်အကြောင်းအရာ: တစ်ဦးက, HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အဆိုပါ HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို, ထိုဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ထိပ်၏ dedusting...
tag ကို: HD ကိုအမျိုးအစားလူပျို Bag ကောက်ခံရေး , လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး , လူပျိုစက် Flat Bag စုဆောင်းခြင်းစက်
HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံစာကြည့်တိုက်ထိပ်, အောက်ခြေ,...
အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုဘောင်
tag ကို: multi ပူးတွဲလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်ကောက်ခံရေး၏နွေဦးလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
tag ကို: စာအိတ်အမျိုးအစားအိတ်လေ့လာကြရအောင် Filter , စာအိတ် Filter ကိုအိတ် Frame က , စာအိတ်ကေ့အိတ်ကေ့
အဆိုပါ splicing အရိုးစုအလုံအလောက်အာကာသမရှိဘဲဖုန်မှုန့်ဘောင်တပ်ဆင်ရန်မြေမှုန့် remover အဘို့အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာပေါင်းစုံခေါင်းကိုကွန်နက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်။ အရိုးစု၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များသဏ္ဌာန် burr မရှိဘဲချောမွေ့နှင့်ဖြောင့်သည်ခိုင်မြဲစွာ welded...
tag ကို: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ပံ့ပိုး , ကေ့အရိုးပံ့ပိုး Deduster , Deduster ပံ့ပိုးမှု Frame က
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏စစ်ထုတ်အိတ်၏အောက်ခြေတွင်မြေမှုန့်စုစည်းဘို့ Ash ကိုသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း။ 1, ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေး: ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေး filter ကိုအိတ်အပေါ်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အမြင့်ဆုံးဖိအားဓာတ်ငွေ့နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ပြင်ပလေထု filter...
tag ကို: Trapezoid Organosilicon ကေ့အရိုး , Trapezoid သွပ်ရည်စိမ်ကေ့အရိုး , Trapezoidal Squirrel ကေ့အရိုး
မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစုများအသုံးပြုမှုများတွင်ကြောင့်သတိပြုသင့်ပါတယ်: အဲဒါကိုမှထွက်ပါစေလှောင်အိမ်၏ပါးလွှာသောပတ်ပတ်လည်သံမဏိရပ်တန့်နှင့်မနိုင်နိုင်အောင် 1, လက်စွပ်များ၏အတွင်းစိတ်အချင်း, ပိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ 2, ပြာ Hopper တွေလည်း၏ဒီဇိုင်းကိုလူတွေကပြာ...
tag ကို: flat Bag Organosilicon Bag ကေ့ , Trapezoid Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Frame က , နွေဦးရာသီအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးလေ့လာကြရအောင်
မျက်နှာပြင်သွပ်ရည်စိမ်, ဆီလီကွန်မျက်နှာပြင်ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့်အမှုန့်မှုတ်လိမ်း: ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်များအတွက်မျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိပါသည်။ 1. မြေမှုန့်အရိုးစုမျက်နှာပြင်၏ galvanizing ကုသမှု...
tag ကို: သံမဏိလေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , အဆိုပါ Grey ကလညျးမီးဖိုအတွက် Organosilicon လေ့လာကြရအောင် , ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှုန်ရေမွှားလေ့လာကြရအောင်
တစ်ဦး organosilicon ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏ Anticorrosion ဝိသေသလက္ခဏာများ Anticorrosion အရိုးစုဖုန်မှုန့်အိတ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။...
tag ကို: MC Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ဆိုက်ကို Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို
လျှောက်လွှာနယ်ပယ် ဒါဟာကျယ်ပြန့်အစားအစာ, ဆေးဝါး, အစာကျွေးခြင်း, သတ္တုဗေဒ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဘိလပ်မြေ, စက်မှု, ဓာတု, လျှပ်စစ်, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ဖုန်မှုန့်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်အသုံးပြုသည်။ အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ...
tag ကို: Air ကို Filter ကိုကေ့နှင့် Venturi , ဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိ Bag , စက်မှု Bag အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏ဝိသေသလက္ခဏာများ အဆိုပါအပြင်ပန်းမြင့်မားသောခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလှဲချသည်။ ယင်းဆလင်ဒါကိရိယာများ၏အပြင်ဘက်၌အကာအကွယ်သံမဏိပန်းကန်ကိရိယာများ၏အစွမ်းသတ္တိ,...
tag ကို: elliptical Dedusting လေ့လာကြရအောင် , Chuck Dedusting လေ့လာကြရအောင် , Heteromorphic Dedusting လေ့လာကြရအောင်
စံချိန်စံညွှန်းများပြုလုပ်ခြင်း အဆိုပါအေလှောင်အိမ် type ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်ထောက်ခံမှုလက်စွပ်နှင့် longitudinal အားဖြည့်အညီအမျှဖြန့်ဝေနေကြသည်နှင့် filtering နှင့်သန့်ရှင်းရေး၏ပြည်နယ်အတွက် filter...
သွေးခုန်နှုန်း (အွန်လိုင်း / Off-line ကို) အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: DS စီးရီး Pulse Bag Filter ကို , type ဖုန်ကောက်ခံရေး , DS စီးရီးဖုန်ဖယ်ရှားရေး
သီးခြားထင်ရှားသော 1. pulsing ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးနည်းပညာ pulsing အဆိုပါအုပ်စုခွဲအခန်းထဲမှာအသုံးပြုခြင်းကသမားရိုးကျသွေးခုန်နှုန်း duster နှင့်အခန်းထဲကပြန်ထိုးနှက် deduster များ၏ချို့ယွင်းချက်အောင်မြင်သော။...
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ MC- အမျိုးအစားအိတ် filter များ
tag ကို: MC အမျိုးအစား Pulse Baghouse , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး , Iron Ore သံသတ္ထုကောက်ခံရေး
haracteristic 1. သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကအုပ်စုခွဲအခန်းထဲမှာ Pulse ကိုအသုံးပြုသည်သမရိုးကျသွေးခုန်နှုန်း duster နှင့်အခန်းထဲကပြန်ထိုးနှက် deduster များ၏ချို့ယွင်းချက်ကိုကျော်လွှားရန်နည်းပညာကိုသန့်ရှင်းရေး pulsate ။...
tag ကို: Backblown ဖုန်ကောက်ခံရေး , DDF ဖုန်ကောက်ခံရေး , DDF အကြီးစားကို Reverse ထိုးနှက် Deduster
DDF ကြီးမားသောအိတ်အသေးစိတ်မိတ်ဆက် deduster ထိုးနှက်ပြန်ရိုက်ထည့်: DDF- ကြီးမားသောအိတ် deduster မှုတ်ကိုပြန်ရိုက်ထည့်ကျယ်ပြန့်, ကြိတ်ခွဲ, ရောစပ်၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုပြခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, smelters,...
tag ကို: HKD Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , လေမှုတ်စက် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , မိုင်းဖုန်ကောက်ခံရေး၏ဈေးနှုန်း
HKD သစ်ကိုလေမှုတ်စက်အိတ် filter ကို၏ 1. တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (1) HKD သစ်ကိုလေမှုတ်စက်အိတ် filter ကို installed နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်နှင့်အညီတင်းကြပ်စွာ check လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ (2) လေကြောင်းစားသုံးမှု, အိပ်ဇောပိုက်က,...
tag ကို: ထရီလီယံကုဗပေကိုအမျိုးအစား Air ကိုအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , အလတ်စား Effect အထုပ် Air ကို Filter ကို , DFC အမျိုးအစား Air ကိုအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး
DFC.GFC.TFC type ကိုဆန့်ကျင်မှုတ်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းမှုတ်ပြာကိုပြန်ပျံ့နှံ့နေတဲ့တစ်ဦးအခန်းထဲသို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနိမ့်စားသုံးမှုလေထု။ အဆိုပါပြည်တွင်းရေး filter ကို type ကိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း။...
LFEF type ကိုဖန်ဖိုင်ဘာအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: LFEF အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစျေး , Glass ကို Fiber Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး
အဆိုပါ LFEF type ကိုဖန်ဖိုင်ဘာအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းအထူးဘိလပ်မြေရိုးလညျးမီးဖိုနှင့်လေမှုတ်စက်၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။...
လေထုအခန်းထဲကအမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်း-ဂျက်အိတ် filter ကို
tag ကို: စက်မှု Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်စုဆောင်းခြင်းစက်မှုဇုန်ပိတ်စ Bag , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးပစ္စည်း
2018 သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုဂိုဒေါင်ခေါင်မိုးဖုန်မှုန့်စုဆောင်း / အစိမ်းရောင် filter ကိုသန့်ရှင်းရေးစက် DMC NEW အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို မူအရအလုပ်လုပ်အထည်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း / ဖုန် Catcher / မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားသည့်စနစ်: 1....
တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CCJ / A အမျိုးအစားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မိုးရွာသွန်းမှု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HX-1410 ဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HMC အမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်းဂျက်တစ်ခုတည်းစက်မြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HD ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းအိတ်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Trapezoid အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွေးခုန်နှုန်း (အွန်လိုင်း / Off-line ကို) အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ MC- အမျိုးအစားအိတ် filter များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HKD အသစ်ကအမျိုးအစားလေမှုတ်စက်အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမျိုးအစားဝေဟင်အိတ်ဖုန်မှုန့် remover အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LFEF type ကိုဖန်ဖိုင်ဘာအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေထုအခန်းထဲကအမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်း-ဂျက်အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge from China, Need to find cheap Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Ycd Hx အမျိုးအစား Discharge, We'll reply you in fastest.
ထိရောက် desulphurization ရေ processor ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထုတ်ကုန်များ(0)
ထုတ်ကုန်များ(0) Company(0)
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဖုန်မှုန့် Collections , စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Desulfurization ကောက်ခံရေး , filter စာနယ်ဇင်း
နေအိမ် ထုတ်ကုန်များ ကိုယ်တို့အကြောင်း ထိတှေ့ Tags: အညွှန်းကိန်း မြေပုံအညွှန်း
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. All rights reserved ။